Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / WOWOW Mpanondraka ara-barotra ao anaty lakozia
[Fananganana varahina mafy】 Ny faucet famenoana vilany mavesatra dia vita amin'ny varahina matanjaka ary milanja 9.7 Ibs. Ny faucet faucet an-dakozia varahina miaraka amin'ny nickel vita amin'ny borosy dia harafesina, harafesina, mahatohitra leak, ary miantoka ny fiarovana ny rano sy ny androm-piainany maharitra.
[2 Fomba fikorianan'ny rano】Pre-Rinse Sprayer loha dia manolotra tifitra mahery vaika mahery vaika hanalana ny sisa tavela amin'ny sakafo, afaka mijanona misokatra amin'ny fanerena iray amin'ny tahony fotsiny izy ary tsy mila mihazona azy. Fomba famenoana vilany sy vilany lehibe ao anatin'ny minitra vitsy. Afaka miasa miaraka izy ireo ary mihodina manodidina ny 360 ° izay mahatonga ny fahandroana hahomby kokoa.
[Hetsika am-pamolavolana】 Ny faucet swivel 360° avo dia manome toerana ampy ho an'ny asa an-dakozia rehetra - fanadiovana, famenoana, sns. Sandry mifamatotra andriamby mba hitazonana ny lohan'ny famafazana ary hisorohana azy tsy hianjera. 90° adjustable tokan-tena famolavolana mora hifehy ny rano mari-pana sy ny habetsahan'ny mikoriana amin'ny fotoana iray ihany.
[Mora ny mametraka】1 na 3 lavaka fametrahana. Manome anao torolalana amin'ny antsipiriany, kojakoja fametrahana ary fitaovana izahay, anisan'izany ny takelaka fandrakofana, hose rano tucai 0.5m amin'ny fiantohana kalitao, fonon-tanana sy ny sisa. Fametrahana mora amin'ny tenanao tsy misy plumber.
[Serivisy ho an'ny mpanjifa】 Voarakotry ny fiverenana maimaim-poana 90 andro sy fiantohana 5 taona. Raha tsy faly amin'ny fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Ny tombony amin'ny lohataona faucet ao an-dakozia dia misintona sprayer amin'ny nutshell:
SKU: 2312000 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Sintomy ny fako an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Fitaovana savoka an-dakozia, Toro-tanana Pull